प्राधिकरण बिग्रिए धेरै क्षेत्र बिग्रिन्छ : कुलमान घिसिङ - dautarimedia.com
सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए ।
कुलमानले ठूलो चुनौती स्वीकारेर दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न आएको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा उनीसँग विजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :
दोस्रो पटक नियुक्त गरेको छ । प्राधिकरणमा तपाईं नै किन आवश्यक हो ?
मैले प्राधिकरणमा म मात्रै आवश्यक हुँ भनेर भनेको छैन । सायद, सरकारले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भनेर मलाई यो जिम्मेवारी दिएको होला । हिजो जुन हिसाबले व्यवस्थापन भइरहेको थियो, सोही कारणले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिइएको होला । प्राधिकरण हिजो नाफामा अघि बढिरहेको थियो । प्रशासनिक र व्यवस्थापनको हिसाबले पनि राम्रो दिशामा अघि बढिरहेको थियो । तर, पछिल्लो एक वर्षमा प्राधिकरण उल्टो दिशामा जान सुरु गर्‍यो । विभिन्न हिसाबले प्राधिकरणको व्यवस्थापन बिग्रँदै गयो । सबैको चाहनाअनुसार सरकारले यो भूमिकामा उपयुक्त देखेको हुन सक्छ ।
धेरैले तपाईंलाई प्राधिकरणबाहेकको वा अर्को ठूलो जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए नि ?
धेरैले मलाई आयल निगम वा अन्य निकायमा लैजाने भनेको सुनें । तर, अन्यत्र मेरो विषयगत क्षेत्र होइन । मैले जुन स्थानको नेतृत्व गरिरहेको छु, त्यो ठाउँ अन्यत्र छैन । म विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम आयात घटाउनुपर्छ भन्ने मान्छु । म आयल निगमका लागि फिट हुने मान्छे होइन । प्राधिकरण बिग्रियो भने यसको प्रभाव सबैतिर पर्छ । यसले आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि सबै रोक्छ । त्यसैले यही जिम्मेवारी दिएको उपयुक्त लाग्छ ।
पहिलो कार्यकालमा धेरै सुधारको जस पाउनु भएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा प्राथमिकता के हुन् ?
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवालाई राम्रो बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो, विद्युत्मा भइरहेको अवरोध हटाएर गुणस्तर सुधार गर्ने हो । तेस्रो, वर्षायाममा बढी भएको विद्युत्लाई कसरी खपत गर्ने, मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, औद्योगिक, घरायसी र व्यावसायिक मागलाई बढाउने र व्यवस्थापन गर्ने मेरो प्राथमिकता हुन्छ । बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण काम छ । हामीले उत्पादन गर्ने एक युनिट विद्युत् पनि खेर जानु भएन ।
दीर्घकालीन रूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्नका लागि स्वदेशी लगानीमा ठूल्ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि धेरै योजना अघि बढाउनुपर्नेछ । जलाशययुक्त आयोजनाहरू तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौं ।
अहिले दूधकोसी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता केही आयोजनाहरू निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छन् । यीबाहेक अपर अरुण, तामाकोसी–५, चैनपुर सेती, फुकोट कर्णालीलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् माग धान्न ठूला परियोजना सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । प्रसारण लाइनका धेरै परियोजना पूरा गर्नुपर्नेछ । विद्युत् माग बढाउन वितरण लाइनको विस्तार पनि आवश्यक छ ।
वितरणलाई अटोमेसन गर्ने र स्मार्ट मिटर प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई दिइने सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने पनि मेरो प्राथमिकता हुनेछ । प्राधिकरणमा प्रविधिको हस्तक्षेप नगरी दीर्घकालीन रूपमा चल्न सक्दैन । कर्मचारीको कल्चर, मान्यतालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन पनि मेरो ध्यान हुनेछ । देशभर विद्युतीकरण गर्ने कामलाई २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पनि प्राथमिकता हुनेछ । योबाहेक काठमाडौंमा तार भूमिगत गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ ।
Previous: मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक युवकको मृत्यु
Next: काठमाडौंमा रोकेर राखेको टिपरमा स्कुटर ठोक्कियो, चालकको मृत्यु